136s एन्ड्रयू कुमोको कोरोनाभाइरस महामारीको बीचमा सम्भावित हस्ती images and subtitles
-न्यु योर्कका गभर्नर एन्ड्र्यू कुमो उपस्थित छन् एक धेरै उच्च प्रोफाइल राजनीतिज्ञ को रूप मा कोरोनाभाइरस प्रकोपको बीचमा। - हामीसँग अझै ट्र्याक्टोररी माथि छ। - संयुक्त राज्यमा महामारीको तीव्र प्रसार अमेरिकीहरूको दैनिक जीवन परिवर्तन भएको छ। पहिले नै चिन्तित र भ्रामक स्थितिको शीर्षमा राजनीतिक मिश्रित सन्देशहरूको एक अतिरिक्त तह हो। - तपाईं सवारी दुर्घटनाहरूमा हेर्नुहोस्, जुन हामीले कुरा गरिरहेका कुनै पनि नम्बर भन्दा धेरै ठूला छन्। यसको मतलब यो होइन कि हामी सबैलाई भन्दैछौं, "कुनै थप कार ड्राइभिंग छैन।" - तर कुवोमो स्पष्टताको लागि प्रयासरत छ उनको दैनिक ब्रीफिंगमा। न्यू योर्कमा कोरोनाभाइरसका अधिक पुष्टि भएका घटनाहरू छन् कुनै पनि अन्य राज्य भन्दा। कुमोको अपडेटहरूले उनको राज्यको आवश्यकतालाई स्पष्ट रूपमा हिज्जे गरेको छ। -Ventilators, भेन्टिलेटर, भेन्टिलेटरहरु। हामीलाई ,000०,००० चाहिन्छ। - राज्यपाल पनि व्यक्तिगत प्रयास बढ्दो डरलाई शान्त गर्न। -मैले देख्न सक्छु न्यू योर्कले कसरी प्रतिक्रिया गरिरहेका छन्। म देख्न सक्छु न्यू योर्कले एक अर्कालाई कस्तो व्यवहार गर्दैछ। म health,००० मानसिक स्वास्थ्य स्वयंसेवकहरू देख्छु। म ,000०,००० स्वास्थ्यकर्मीहरू माथि बढिरहेको देख्छु। मैले विक्रेताहरू मलाई बोलाउँदै भने, "म मद्दत गर्न सक्छु"। त्यो न्यूयोर्क हो। त्यो न्यूयोर्क हो। परिणामको रूपमा, ब्रीफिंगहरू नियुक्ति अवलोकन बनेका छन् न्यू योर्क र त्यसभन्दा अघि पनि। कुउमो पनि धेरै निष्पक्ष भएको छ ट्रम्प प्रशासन मा आफ्नो विचार संग। संकटको सुरुमा, कुमो र ट्रम्प सुरु भयो एक फरक मिल्दा भिन्नतालाई अलग संग। - तर राष्ट्रपति र म हिजोमा सहमत भए, हेर्नुहोस्, हामी उही युद्ध लडिरहेका छौं, र यो एक युद्ध हो। - तर जसरी अवस्था झन् खराब हुँदै गयो, तिनीहरूको पछाडि र पछाडि बढी तातो भयो। - तपाई 400०० वान्तेभाषा पठाउनको लागि पछाडि प्याट चाहानुहुन्छ? हामी के गर्ने छौं 400०० भेंटिलेटरहरूसँग जब हामीलाई ,000०,००० भेन्टिलेटरहरू चाहिन्छ। - तर तपाईलाई थाहा छ यदि तपाई राज्यपाल कुमोको बारे सोच्नुहुन्छ भने, हामी उसलाई चार अस्पतालहरु बनाइरहेका छौं। हामी उसलाई चार मेडिकल सेन्टर बनाउँदैछौं। हामी न्यु योर्कका मानिसहरुको लागि धेरै साह्रै कठिन काम गर्दैछौं। हामी उहाँसँगै काम गरिरहेका छौं, र त्यसपछि म गुनासो शो मा उसलाई हेर्नुहोस्। - रिपरडलेस यदि ट्रम्प कुमोको ब्रीफिंगमा आउँदछन् वा हुँदैन, गभर्नर द्वारा यी दैनिक अपडेटहरू मुख्य बनेका छन् मार्गनिर्देशन र सान्त्वना खोज्ने न्यू योर्कहरूको लागि। - हामी यो बनाउने छौं किनभने मलाई न्यु योर्क मनपर्दछ, र म न्यू योर्क मन पराउँछु किनभने न्यूयोर्कले तपाईंलाई माया गर्छ।
एन्ड्रयू कुमोको कोरोनाभाइरस महामारीको बीचमा सम्भावित हस्ती
< start="0.12" dur="1.92"> -न्यु योर्कका गभर्नर एन्ड्र्यू कुमो उपस्थित छन् >
< start="2.04" dur="2.2"> एक धेरै उच्च प्रोफाइल राजनीतिज्ञ को रूप मा >
< start="4.24" dur="1.79"> कोरोनाभाइरस प्रकोपको बीचमा। >
< start="6.03" dur="2.4"> - हामीसँग अझै ट्र्याक्टोररी माथि छ। >
< start="8.43" dur="2.14"> - संयुक्त राज्यमा महामारीको तीव्र प्रसार >
< start="10.57" dur="2.07"> अमेरिकीहरूको दैनिक जीवन परिवर्तन भएको छ। >
< start="12.64" dur="3.03"> पहिले नै चिन्तित र भ्रामक स्थितिको शीर्षमा >
< start="15.67" dur="2.43"> राजनीतिक मिश्रित सन्देशहरूको एक अतिरिक्त तह हो। >
< start="18.1" dur="2.7"> - तपाईं सवारी दुर्घटनाहरूमा हेर्नुहोस्, >
< start="20.8" dur="2.97"> जुन हामीले कुरा गरिरहेका कुनै पनि नम्बर भन्दा धेरै ठूला छन्। >
< start="23.77" dur="2.26"> यसको मतलब यो होइन कि हामी सबैलाई भन्दैछौं, >
< start="26.03" dur="1.35"> "कुनै थप कार ड्राइभिंग छैन।" >
< start="27.38" dur="2.14"> - तर कुवोमो स्पष्टताको लागि प्रयासरत छ >
< start="29.52" dur="1.31"> उनको दैनिक ब्रीफिंगमा। >
< start="30.83" dur="2.58"> न्यू योर्कमा कोरोनाभाइरसका अधिक पुष्टि भएका घटनाहरू छन् >
< start="33.41" dur="1.43"> कुनै पनि अन्य राज्य भन्दा। >
< start="34.84" dur="3.09"> कुमोको अपडेटहरूले उनको राज्यको आवश्यकतालाई स्पष्ट रूपमा हिज्जे गरेको छ। >
< start="37.93" dur="3.59"> -Ventilators, भेन्टिलेटर, भेन्टिलेटरहरु। >
< start="41.52" dur="1.38"> हामीलाई ,000०,००० चाहिन्छ। >
< start="42.9" dur="1.9"> - राज्यपाल पनि व्यक्तिगत प्रयास >
< start="44.8" dur="1.35"> बढ्दो डरलाई शान्त गर्न। >
< start="46.15" dur="3.22"> -मैले देख्न सक्छु न्यू योर्कले कसरी प्रतिक्रिया गरिरहेका छन्। >
< start="49.37" dur="3.37"> म देख्न सक्छु न्यू योर्कले एक अर्कालाई कस्तो व्यवहार गर्दैछ। >
< start="52.74" dur="2.67"> म health,००० मानसिक स्वास्थ्य स्वयंसेवकहरू देख्छु। >
< start="55.41" dur="4.1"> म ,000०,००० स्वास्थ्यकर्मीहरू माथि बढिरहेको देख्छु। >
< start="59.51" dur="3.48"> मैले विक्रेताहरू मलाई बोलाउँदै भने, "म मद्दत गर्न सक्छु"। >
< start="62.99" dur="2.83"> त्यो न्यूयोर्क हो। त्यो न्यूयोर्क हो। >
< start="65.82" dur="2.45"> परिणामको रूपमा, ब्रीफिंगहरू नियुक्ति अवलोकन बनेका छन् >
< start="68.27" dur="1.48"> न्यू योर्क र त्यसभन्दा अघि पनि। >
< start="69.75" dur="1.81"> कुउमो पनि धेरै निष्पक्ष भएको छ >
< start="71.56" dur="1.77"> ट्रम्प प्रशासन मा आफ्नो विचार संग। >
< start="73.33" dur="2.54"> संकटको सुरुमा, कुमो र ट्रम्प सुरु भयो >
< start="75.87" dur="2.22"> एक फरक मिल्दा भिन्नतालाई अलग संग। >
< start="78.09" dur="2.36"> - तर राष्ट्रपति र म हिजोमा सहमत भए, हेर्नुहोस्, >
< start="80.45" dur="3.83"> हामी उही युद्ध लडिरहेका छौं, र यो एक युद्ध हो। >
< start="84.28" dur="2.48"> - तर जसरी अवस्था झन् खराब हुँदै गयो, तिनीहरूको पछाडि र पछाडि >
< start="86.76" dur="1.57"> बढी तातो भयो। >
< start="88.33" dur="3.39"> - तपाई 400०० वान्तेभाषा पठाउनको लागि पछाडि प्याट चाहानुहुन्छ? >
< start="91.72" dur="2.76"> हामी के गर्ने छौं 400०० भेंटिलेटरहरूसँग >
< start="94.48" dur="3.03"> जब हामीलाई ,000०,००० भेन्टिलेटरहरू चाहिन्छ। >
< start="97.51" dur="2.64"> - तर तपाईलाई थाहा छ यदि तपाई राज्यपाल कुमोको बारे सोच्नुहुन्छ भने, >
< start="100.15" dur="1.88"> हामी उसलाई चार अस्पतालहरु बनाइरहेका छौं। >
< start="102.03" dur="2.09"> हामी उसलाई चार मेडिकल सेन्टर बनाउँदैछौं। >
< start="104.12" dur="3.92"> हामी न्यु योर्कका मानिसहरुको लागि धेरै साह्रै कठिन काम गर्दैछौं। >
< start="108.04" dur="0.98"> हामी उहाँसँगै काम गरिरहेका छौं, >
< start="109.02" dur="2.19"> र त्यसपछि म गुनासो शो मा उसलाई हेर्नुहोस्। >
< start="111.21" dur="2.92"> - रिपरडलेस यदि ट्रम्प कुमोको ब्रीफिंगमा आउँदछन् वा हुँदैन, >
< start="114.13" dur="2.4"> गभर्नर द्वारा यी दैनिक अपडेटहरू मुख्य बनेका छन् >
< start="116.53" dur="2.72"> मार्गनिर्देशन र सान्त्वना खोज्ने न्यू योर्कहरूको लागि। >
< start="119.25" dur="5.17"> - हामी यो बनाउने छौं किनभने मलाई न्यु योर्क मनपर्दछ, >
< start="124.42" dur="4.58"> र म न्यू योर्क मन पराउँछु किनभने न्यूयोर्कले तपाईंलाई माया गर्छ। >